यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं ! - News20 Media
January 1, 2020 N20LeaveaComment on यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले EBAY मा बेचौं !
आफु संग बएको पुरानो नोटको एउटा ठुलो साइजमा क्लियर फोटो खिच्नुहोस् ।नोटको विविरण, सिरियल नम्बर, कुन जमाना छापिएको सबै उल्लेख गर्नुहोस । तपाईले खिचेको नोटको सफा फोटो लाइ ebay को वेबसाइटमा अपलोड गर्नु होस् ।आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि नगर्नु होला ।
यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने eBay को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ । त्यहाँ ५ डलर देखि १०० डलर सम्मका नेपाली नोट अपलोड गरिएका छन् ।इन्टरनेटमा बेच्न सुरु गरिदिनुस, तपाई संग भएको नोटको जुन मार्केट भ्यालु छ त्यो भन्दा १० गुना धेरै पैसा नोट बेचेर कमाउन सक्नु हुन्छ ।प्राय जसो चिनिया, इन्डियन, अमेरिकी लगाएत विश्वका विभिन्न देश बाट नोट खरिद गर्छन ।
पोखरा : भ्रमण वर्षमा आफ्नो प्रदेशले मात्रै आधा योगदान गर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । प्रदेश राजधानी पोखरामा बुधबार नेपाल भ्रमण वर्षको सुरुआत गर्दै उनले सरकारबाट राखिएको २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा गर्न आफ्नो प्रदेशले आधा योगदान गर्ने बताएका हुन् ।मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपाल सरकारबाट भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा हुनुअघि नै गण्डकीले छिमेकी देश भ्रमण वर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेकोसमेत स्मरण गरे ।
‘तथ्यांकले भन्छ अहिले पनि नेपालमा आउनेमध्ये ४० प्रतिशत पर्यटक गण्डकी प्रदेशमा आउँछन्’, उनले भने, ‘अब २० लाख पर्यटक भिœयाउन हामीले आधा योगदान गर्नुपर्छ ।’देशका सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्तिपीठ गण्डकी प्रदेशमा रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘भगवानलेसमेत मन पराएको ठाउँ पर्यटकले पनि पक्कै मन पराउँछन्’, उनले भने । मुख्यमन्त्री गुरुङले यही वर्ष पोखराका रत्नमन्दिर र हिमागृह खोल्न नेपाल ट्रस्टसँग समन्वयन गर्ने पनि सुनाए ।
दुबईमा चौधरी ग्रुपको पहिलो लक्जरी होटल सञ्चालनमा